Galmada waxaa kaa saacidi kara adigoo qaatay qodobadaan hoos kuxusan…. - iftineducation.com
Galmada waxaa kaa saacidi kara adigoo qaatay qodobadaan hoos kuxusan….
iftineducation.com – Bisqinta oo la xiiro:- Bisqintu (Shuunku) waxa weeye timaha kasoo baxa xubnaha taranka rag iyo dumarba dushooda. Bisqinta oo la xiiraa waxay gacan ka geysataa koritaanka xididdada dhiigga qaada xilliga kacsiga. Sidoo kale waxay cambarka ka ilaalisaa dhibaatooyinka dibadda kaga yimaada.